ubhaptizo lweentsana – 2fish
ekhaya / Church / amiswa / ukubhaptizwa / ubhaptizo lweentsana
Kutheni amaKatolika ukubhaptiza iintsana, xa iintsana abakwazi ukuthetha ngokwabo? The Catholic Church ifundisa, "Yokugwetyelwa kwethu oko kuphuma ngobabalo lukaThixo. uGrace umusa, uncedo simahla yaye obungasifanelanga uThixo usinika ukusabela ubizo lwakhe lokuba babe ngabantwana bakaThixo, oonyana ingaya, ngamadlelane ngemvelo yobuThixo nobomi obungunaphakade " (iCatechism 1996). Ukubhaptizwa umntwana, ngubani na engenakukwazi yayo becela ukuba basindiswe, ke, ibonisa ngokugqibeleleyo iyonke ukuxhomekeka umphefumlo phezu kobabalo lukaThixo.
Xa sifumana iintsana ubungqina babhaptizwa kwiinkulungwane zokuqala ubuKristu, ke musa ukufumana le nto impikiswano de Anabaptist benza njalo kwinkulungwane yeshumi.1 AmaKristu abalahla iintsana wayebhaptiza baye bacele akukho sibonelelo ngokusuka eZibhalweni ukuba yona. kodwa, yi ithokheni efanayo, akukho i isalelo ecacileyo nxamnye nayo mhlawumbi. Inyaniso, ukuba iBhayibhile ibonisa Saint UYohane umbhaptizi efumana uMoya oyiNgcwele ngoxa ngaphakathi esibelekweni sikanina lwenza ukuba ukungcwaliswa kweentsana ingqiqo eBhayibhileni (Luke 1:15, 41; cf. Khu. 16:17; Rhu. 22:10; ngenxa. 1:5). Kukho ubungqina ezongezelelweyo eBhayibhileni kwakunye ukuba abantwana bafanele ukuba babhaptizwe. In zeVangeli, njengokuba, sibona oomama bezisa abantwana babo abancinane, yaye "neentsana,"Njengoko sikaLuka ubalula, eNkosini ukuba abeke izandla zakhe phezu kwabo. Xa abafundi angenelele, UYesu emkhuza kubo, bathi, "Bayekeni abantwana beze kum, yaye akasayi kukha angene kubo; ngokuba bubobabo banjalo ubukumkani bukaThixo. Ngempela, Ndithi kuwe, Othe akabamkela ubukumkani bukaThixo njengomntwana, akayi kukha angene kubo " (Luke 18:15-17, okqhubekayo.). Ukufundisa isihlwele ngePentekoste ukuba babhaptizwe, uPetros uthi, "Kuba idinga likuni nakubantwana benu ... wonke awobabiza uYehova kuye " (izenzo 2:39; ugxininiso added). UPawulos uchaza Ubhaptizo njengokuzaliseka wolwaluko, benze isithethe lwenziwa kwi iintsana (Col. 2:11-12). Ekugcineni, kukho iziganeko iZibhalo apho imizi yonke, kuquka abantwana abancinane neentsana, babhaptizwa (ukubona izenzo 16:15, 32-33, okqhubekayo.).
Ukuba iintsana abakwazi ukucela Ubhaptizo ngokwabo asinto lokuphikisa kokubhaptizwa kwabo. Emveni kwakho konke, Akukho namnye unako ukuza kuThixo yenyathelo yakhe, kodwa kuphela ngobabalo lukaThixo. Iintsana kuphathwa ekubhaptizweni, kungabi ngenxa yokholo lwabo, kuphela kungokukholwa lamagad yeBandla, efana intombi kaYayiro onikhuphileyo ekhutshiwe kwabafileyo ngalo ukholo lwabazali bakhe (Matt. 9:25; cf. John 11:44; izenzo 9:40). Ukuba isipho sobomi zendalo ukuze ndibuyiselwe ngale ndlela, kutheni isipho sobomi oyinqaba? Umntwana kusiwa womgca alefwaya ifuze onedumbe ka Matthew 9:2, eyalo abanye ebusweni beNkosi. Inyaniso, akukho nto ibonisa ngokupheleleko ukuxhomekeka ngokuphelelyo yomntu phezu ubabalo lukaThixo ukuzuza usindiso ezinjengokubhaptizwa kweentsana, kokubonakala akakwazi sokucela yomthendeleko ngu ngokuzithandela kwakhe umntwana (cf. iCatechism 1250). Njengoko obhaptiziweyo kuza ekuvuthweni namandla akhe ukukhonza uThixo ukunyuka, ke kufuneka ukuba athi buqu inkolelo yakhe kuKristu isakramente Kokuqinisekisa.
Ukuze athi kwiintsana kunye nabantwana abancinane akukho mfuneko yokuba Ukubhaptizwa na isiphumo ukuba bathi akukho mfuneko ukuze basindiswe-akukho mfuneko, yiyo i, uMsindisi! Ngoxa bantwana abangaphantsi kweminyaka ngesizathu bangazikisiyo yezono kanye, ukuba bazalwa ityala Isono Original umphefumlo wabo (cf. Rhu. 51:7; I-ROM. 5:18-19), ekufuneka yakuhlamba ekubhaptizweni. imfundiso yeCawa kwi Isono iye yakhokelela nabagxeki bakhe ukucinga afundise abantwana bafe ngaphandle Ubhaptizo fela Esihogweni. Liyinyaniso elokuba ezinye Ootata kabuhlungu igcine le mbono, kodwa iingxelo omnye okanye ngaphezulu Ootata musa ukuba kuthethe ukufundisa Church esemthethweni. kuphela ngazwi ubungqina Ootata ngombandela wokholo kunye nokuziphatha ibanjwa ukuba imfundiso akunampazamo. Inyaniso kukuba, iCawa nga dogmatically kuchazwa ziyahlelwa abantwana abafa Nkhuvulo. the iCatechism lithi, "Kanjalo, inceba enkulu kaThixo onga yena bangasindiswa bonke abantu zisindiswe, kunye noYesu 'nesisa abantwana ... ukuvumela ukuba nethemba lokuba kukho indlela yosindiso abantwana abathe bafa ngaphandle Ubhaptizo " (1261). 2
Ubungqina Imbali Ukubhaptizwa leentsana ikhona jikelele ukusuka ekuqaleni. ukuba Didache, iBandla dating ngesandla kwinkulungwane yokuqala, ivumela Ukubhaptizwa nokuba ngokuntywiliselwa okanye ngokugalela, kuxhomekeka kwimeko, ibonisa AmaKristu okuqala ukubhaptizwa iintsana zabo.3 Malunga nonyaka 156, Saint UPolycarp of laseSmirna, umfundi kumpostile uYohane, wamemeza nje kokuba ukholo lwakhe awusebenzileyo noKristu iminyaka engamashumi asibhozo anesithandathu, yiyo i, kwasebuntwaneni (ukubona Le baza kubulawelwa of Saint UPolycarp 9:3). Around 185, umfundi UPolycarp kaThixo, Saint Irenaeus eLyons, wathi, "[uJesu] weza kusindisa bonke ngesiqu,bephe-, ndithi, ngubani ngaye ngoku ngokutsha kuThixo-kwiintsana, kunye nabantwana, nentsha, namadoda amadala. Ngoko ke edlula ngayo yonke iminyaka, ukuba usana kwiimveku, obangcwalisayo abantwana; umntwana abantwana, ungcwalisayo abo kuloo ubudala " (Against Heresies 2:22:4). "Kwakhona ndinibhaptiza iintsana zakho ...,"Wabhala Saint uClement waseAlexandria emhlabeni nyaka 200. "Ngokuba uthi: 'Bavumeleni abantwana beze kum, ningabaleli ' (Matt. 19:14)" (I Apostolical siseko 6:15). Ngaxeshanye, Saint nguHippolytus wanikela le miyalelo ilandelayo ethembekileyo, "Nibabhaptize abantwana kuqala; kwaye ukuba bakwazi ukuthetha ngokwabo, mabakwenze oko. kungenjalo, abazali babo okanye nezinye izalamane athethe kubo " (Abaseki Isiko 21).
Nakuba uTertullian, emhlabeni A.D. 200, Kucetyiswa nxamnye ubhaptizo lweentsana, akazange bathandabuze ukusebenza kwayo, kodwa nje ubulumko bayo (ukubona ukubhaptizwa 18:4-6). Ngokufanayo, ingcamango ukuba ubhaptizo sifanele ukuba kulibaziseke de iintsuku ezisibhozo emva kokubeleka, zixoxwe kwaye kamva agatywe liBhunga Carthage ngo 252. Malunga nokunyaniseka Ukubhaptizwa kweentsana wayengekho umba kulo mzekelo noba. ↩
Ngokuphathelele imbono Church malunga usindiso iintsana abangabhaptizwanga, kuye kwabakho ukudideka malunga nesigama nkolelo, iinzame senkolelo ukuba ayicamagushele imfuneko Ukubhaptizwa usindiso kunye eyenzekayo ikukuba amanye abantwana Andinakuphila ngaphandle kwawo. Ngokwahlukileyo koko wakhe kahle ethandwayo, ithiyori waqonda kakuhle ibamba ukuba Limbo asiyiyo indawo yentuthumbo kodwa ukuchulumacha. Abo kungena Limbo kuphila kummandla we ofezekileyo, ubuhle bendalo kunye noxolo. kunjalo, ngokuba Limbo engazange elinebaxiweyo i izinga imfundiso, AmaKatolika bakhululekile ukuba abavumelani; yaye oku bekungasoloko kunjalo.
Kuye kwakhona okuphakanyiswe ukuba abantwana ongabhaptizwanga kutshabalala sasindiselwa ubhaptizo Umnqweno, yiyo i, yi ngumnqweno ukuba iCawa ngokuzibona ukuba bonke abo babhaptizelwa abafileyo. "ICawa akazi na kuthetha ngaphandle Ubhaptizo into esiqinisekisa ukungena beatitude engunaphakade,"Eyifunda iCatechism; "Le nto yena uthatha siqikelele singazihoyi mission yamkeliswe eNkosini ukubona ukuba bonke abo ubhaptizwe ukuba 'ngokutsha ngamanzi nanguMoya' (John 3:5). UThixo abophe usindiso isakramente Ukubhaptizwa, kodwa yena akayi ubotshelelwe isidlo zakhe " (1257).
Umzobo phezu silindele evutha iCawa ukuba abantwana abafa babhaptizwayo zigcinwa ngokwenene, Pope John Paul waqinisekisa abafazi abaye baguquka emva kokuba isisu, "Wena uya kuba nako ukubuza uxolelo umntwana wakho, ngubani ngoku siphila eNkosini " (Evangelium Vitae 99; Uyise William P. Saunders, "Iimpendulo Tye: Ngaba kwezisu Abantwana Yiya Ezulwini?", Arlington Catholic Herald, EyeDwarha 8, 1998). ↩
Njengoko Bertrand L. Conway waveza, kukho ubungqina olubanzi zakudala ezingqina kwisenzo Ukubhaptizwa effusion eCaweni ekuqaleni. art lwakudala, ezifana kwi mangcwaba kunye bapistries okuqala, ngokuqhelekileyo bonisa ukuma ndabhaptizwa echibini kuyaphi ngamanzi sendithululwa ngokomnikelo phezu kwentloko yakhe. Conway kwakhona ixoxe ukuba amawaka amathathu uguqula ngePentekoste (izenzo 2:41) ayikwazanga abaye babhaptizwa ngenxa ngokuntywiliselwa ngenxa iinombolo zabo kunye nokungabikho umzimba omkhulu wamanzi eYerusalem. ukuntywiliselwa, waphawula, bekuya kuba lukhuni kwakunye kwikhaya likaKorneli (izenzo 10:47-48) kwaye entolongweni eFilipi (izenzo 16:33). Ekugcineni, wayecamanga ukuba imfuneko Ukubhaptizwa usindiso kuthetha ngaphandle ngokuntywiliselwa kufuneka bungavumeleki iifom, kungenjalo njani obanjiweyo, nabagulayo, abantwana abancinane, kunye nabo bahlala kwimimandla kakhulu ezifana ne-Arctic Circle okanye iyintlango kufumana ubhaptizo? (the Ibhokisi umbuzo, Inew York , 1929, pp. 240-241). ↩
EyeDwarha 9, 2019